Abụ Ọma 4 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Abụ Ọma 4:1-8
Ntụziaka e nyere onye nduzi. A ga-eji ụbọ akwara+ kpọọ ya. Abụ olu ụtọ Devid. 4 Mgbe m kpọkuru gị, biko, za m, Chineke m bụ́ onye ezi omume.+ N’oge ahụhụ, meere m ohere sara mbara. Meere m amara,+ nụkwa ekpere m. 2 Unu ụmụ mmadụ, ruo ole mgbe ka unu ga na-akpụ ùgwù m+ n’ala, Ebe unu nọ na-ahụ ihe efu n’anya, Ebe unu nọ na-achọ okwu ụgha? Sila. 3 Ya mere, maranụ na Jehova ga-emeso onye na-eguzosi ike n’ebe ọ nọ+ mmeso pụrụ iche; Jehova ga-anụ mgbe m kpọkuru ya.+ 4 Weenụ iwe, ma unu emehiela.+ Kwuonụ ihe unu chọrọ ikwu n’ime obi unu, n’elu ihe ndina unu,+ ma gba nkịtị. Sila. 5 Chụọnụ àjà ezi omume,+ Tụkwasịkwanụ Jehova obi.+ 6 E nwere ọtụtụ ndị na-ajụ, sị: “Ònye ga-eme ka anyị hụ ihe ọma?” Jehova, biko, mee ka ìhè si n’ihu gị nwukwasị anyị.+ 7 Mee ka obi m ṅụrịa ọṅụ+ Karịa ọṅụ ha na-enwe mgbe ọka* na mmanya ọhụrụ ha dị ukwuu.+ 8 M ga-edina ala hie ụra n’udo,+ N’ihi na ọ bụ naanị gị, Jehova, na-eme ka m nọrọ n’obi iru ala.+
Abụ Ọma 4